Emirates လေကြောင်းလိုင်းအလုပ်အကိုင်များ - Global Airway အလုပ်အကိုင်များ - CV တင်ပါ။
စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုလေကြောင်းလိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေး - ယခုတင်သွင်းကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း
Hyderabad, မွန်ဘိုင်းနှင့်ချင်နိုင်းအတွက် Quikr အလုပ်အကိုင်များ
Emirates လေကြောင်းလိုင်းများသည် ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ လမ်းပြ။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းအလုပ်အကိုင်နေရာများအတွက်စာရေးခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ငါတို့စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဆင်းသက်ကတည်းက။ ငါတို့ကုမ္ပဏီကဏ္sectionsများသို့သင်လည်ပတ်သင့်သည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ငါတို့သတင်းအချက်အလက် Read။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ HR အဖွဲ့ကဒီနေ့သင်အလုပ်အကိုင်အရဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်သလဲဆိုတာကိုကြည့်။ ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်အစာရှောင်-ကြီးထွားလာလေကြောင်းလိုင်းကဏ္ဍဟုမပါဘဲသွားသည့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ ကျိန်းသေသငျသညျကိုငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်။ များမှာကုမ္ပဏီများရဲ့အကောင်းဆုံး ထူးချွန်ထက်ပို 400 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆုနှင့်အတူ။ ထိုသူတို့၏အဆင့်ကိုအတော်လေးခက်ခဲနည်းနည်းတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, ကုမ္ပဏီအများစုအောင်မြင်ရန်ပါဘူး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများမရှိဘဲဤ status ကို။ ဥပမာအားဖြင့်အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်ကနေကမ္ဘာ့အဆင့်မီလုပ်သားအင်အား။
တစ် ဦး အတွက်အလုပ်လုပ်နေစဉ် လေဆိပ် သို့မဟုတ်လေယာဉ်ပျံပင်။ The အသစ်ကအလုပ်သမားအသစ်ကကျွမ်းကျင်မှုတွေအများကြီးသင်ယူပါလိမ့်မယ်။ နှင့်သင်တန်း၏, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်အရေးကြီးသောဖြစ်လိမ့်မည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များအမှုဆောင်အရာရှိ airlanes ။ ကျိန်းသေကုမ္ပဏီများရန်၎င်း၏ပူးပေါင်းအချိန်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့။ သင်ကုမ္ပဏီ join ကတည်းကကြောင့်ဖြစ်သည်။ သေချာဘို့သင်သည်သင်၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့ marking ။ ဒါဟာကိုယ့်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဒါဟာရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲ။ ဥပမာအားဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းတွေ့ဆုံ၏လေးပုံတပုံ။ အပြုသဘောဘက်, အောင်မြင်မှုနှင့်ထူးခြားပြောင်မြောက်တိုးတက်မှုနှုန်းတွင်။ ဥပမာ, Etihad နှင့်ကာတာလေကြောင်းလိုင်းအတော်လေးကျော်သွားကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုစော်ဘွားများအုပ်စုသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း။ ပေးအစီရင်ခံစာများ-၏အနည်းငယ်ဘီလီယံသူတို့အနေနဲ့ပိုမိုအမြတ်ဖြစ်သည်။ နောက်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အဘို့, ရှေ့ဆက်ရွေ့လျား။
လုပ်တယ် ရာထူး လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုနှင့်အတူထိုက်တန်သလား။ Emirates အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူအဖြစ်သူတို့၏တက်ကြွသောချဉ်းကပ်ပုံကသင့်ကိုနှစ်သက်ပါသလား။ မင်းအဖြေကဟုတ်လား။ ကြိုဆိုပါတယ် ဒူဘိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ကုမ္ပဏီအတွက်သင်၏ပရိုဖိုင်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည် ဒူဘိုင်း စီးတီးကုမ္ပဏီ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် အမ်းမရိတ် Group မှ Careers ရေးစင်တာ။ နှင့် Air ကိုအာရေဗျအလုပ်အကိုင်များအပိုင်း.
ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကူညီပေးနေမျှော်လင့်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီတွေဟာပတ်ပတ်လည်ထိပ်အဆင့်တွင်ဖြစ်ကြ၏။ လေကြောင်းလိုင်းကုမ္ပဏီတွေအတွက်အလုပ်လုပ်။ သငျသညျလိုအပျမညျ ယေဘုယျအားဖြင့်ကုမ္ပဏီရှိသည်ဖို့အတော်လေးအလုပ်များကိုစကားပြော။ ငှားရမ်းသူအများအပြားစော်ဘွားကုမ္ပဏီများမှရှိပါတယ်။ စိတ်၌ဤအတူ, သင်အတော်ကြာကုမ္ပဏီများပူးပေါင်းနိုင်ပါ။ ကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့ကြကြောင်းကုမ္ပဏီများစာရင်းရှိပါသည်။ ထိုအခါသူတို့ကိုပူးပေါင်းကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည် ယောဘသည်ရှာဖွေသူများအတွက်အလွန်စမတ်စိတ်ကူး။ ဒါကြောင့်တကယ်တော့သင်လေကြောင်းလိုင်းကုမ္ပဏီတွေဆီကအလုပ်တွေရနေရင်ကောင်းတာပေါ့။ ဒီအလုပ်တွေကိုငါတို့လုပ်နေတယ် ယူအေအီး။ ထိုမှတပါး, အင်ဒိုနီးရှား, ကူဝိတ်နှင့်ပင်စင်္ကာပူမှာ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကုမ္ပဏီများသည်ရလဒ်ကြီးထွားခြင်းနှင့်ရရန်ကူညီခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်။
အတူ Start ဂျက်လေကြောင်းလိုင်း Careers မြေန်ထမ်း
စော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များစတင်ရန်။ မေ့လျော့မနေပါနဲ့ သငျသညျအတှေ့အကွုံအများကြီးရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာများအတွက် လေကြောင်းအလုပ်အကိုင်များ။ အဖြစ်ကောင်းစွာအရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာရှအဖြစ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဥရောပနှင့်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများအားအပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်းနှင့်သင်တန်းများပေးသညျ။ ကျနော်တို့ဂျက်လေကြောင်းလိုင်း Careers အလုပ်ရရန်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်န်ထမ်းများမြေဖော်ပြထားခြင်း။ ယခုအချိန်တွင်သူတို့ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း လျှောက်ထားရန်အနည်းငယ်အလုပ်အကိုင်များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ HR ကိုယ်စားလှယ်များ။ Emirates လေကြောင်းလိုင်းများသည် ဒူဘိုင်းမြို့ ကုမ္ပဏီ။ ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန် အဲဒီမှာ Arline အလုပ်စတင်နိုင်ရန်သင့်အားအကြံပေး.
ဂျက်လေကြောင်းလိုင်း Careers န်ထမ်းများမြေ - ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကအတူအလုပ်သမားဖြစ်လာ!
Air ကိုအာရေဗျနဲ့ကာတာ, စင်ကာပူနှင့် Etihad
Air India နှင့် အခန်းသင်္ဘောသားအလုပ်အကိုင် - စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုလေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များ
CV ကို FlyDubai အလုပ်အကိုင်များသို့တင်ပါ ကူဝိတ်လေကြောင်း Careers။ ထို့အပြင်စင်ကာပူလေကြောင်းလိုင်းနှင့်အခြားသောငှားရမ်းသောအဖွဲ့အစည်းများလည်းရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HR ကုမ္ပဏီဟာမင်းကိုကူညီဖို့ဒီနေရာကိုရောက်လာတယ်။ ပြီးတော့ ပင်လယ်ကွေ့ဒေသတွင်သို့မဟုတ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းရ။ ကျနော်တို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားများနှင့်အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်နေရာလွတ်တွေအများကြီးရှိခြင်းနေကြသည်။ လည်းပဲ အိန္ဒိယကနေထောက်ပံ့အလုပ်ရှာဖွေနေန်ဆောင်မှုကလူ နှင့်ပါကစ္စတန်။ အပြုသဘောဘက်တွင်ပင်ကာတာနှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျလုပ်သားများ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကရိုက်နေကြသည်။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှသို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကုမ္ပဏီများမှငှားရမ်းဖို့ကိုယ်ရေးရာဇဝင် post များနှင့်လာရန်အဘို့အအံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များစောင့်ဆိုင်းကျေးဇူးပြုပြီးနှင့် လေကြောင်းလိုင်းအိပ်မက်အသကျရှငျစတင်နိုင်။ တစ်ဦးနှင့်အတူစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုလေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်!.
CV ကိုတင်ပါ FlyDubai အလုပ်အကိုင်များ နှင့်ကူဝိတ်လေကြောင်းလိုင်းအလုပ်အကိုင်များ။ ငါတို့ဒီမှာ သငျသညျအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းရဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ တစ်ဦးဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုလေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များကိုယခုလမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးကိုစတင်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့နေရာလွတ်တွေအများကြီးရှိခြင်းနေကြသည်။ အဖြစ်အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်နှင့်ပင်ကာတာကနေလူတွေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှသို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကုမ္ပဏီများအားကိုယ်ရေးရာဇဝင် post ။
အလုပ်လုပ်မှကုမ္ပဏီများဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ & စာရင်း!
ကမ်ဘာပျေါတှငျအလုပျလုပျဖို့အကောင်းဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ။ Airlane ကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်မလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, ကမ္ဘာပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမအဆိုးဆုံးလေကြောင်းလိုင်းများရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်အသုံးပြုနေသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့အမှတ်အသားအမြဲရွေ့လျား။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီလေယာဉ်ကုမ္ပဏီများကလုပ်ကိုင်ဖို့ထင်ရှားခဲ့သည်။ အဘယ်လျော်ကြေးငွေသို့မဟုတ်လစာနှင့် သငျသညျလမ်းလျှောက်-in ကိုရနိုင်မည့်အင်တာဗျူး။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ထိုသူအချို့တို့သည်အံ့အားသင့်စရာအလုပ်ရှာဖွေသူများဖြစ်ကြသည်။ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့တစ်ဦးကအများကြီးရှိပါတယ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာငှားရမ်း။
ဒါကြောင့်, သင်သည်ဤအပိုင်းနှင့်အတူအဘယျသို့ပွုနိုငျပါသညျ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ဆဋ္ဌမနှစ်ပတ်လည်ငှားရမ်းအချက်အလက်များ၏အပိုင်းပိုင်းလိုအပ်ပါသည်။ လေကြောင်းလိုင်းများစက်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအဓိကသတင်းအချက်အလက်နှိပ်ပါ။ ထို့အပြင်, ဝန်ဆောင်မှု၏အရည်အသွေးအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ ကချွန်ကုမ္ပဏီအပေါ်တစ်ဦးအလုပ်ရရန်ထိုက်သည်ဆိုပါကတစ်ဦးကလူတစ်ဦးကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျတခုအပေါ်-အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင်နိုင်ပါသည်။ နှင့် ဘယ်မှာပင်ဖိလစ်ပိုင်အလုပ်သမားအဖြစ်လျှောက်ထားရန်။ ထိုမှတပါး, ပြည်ပမှာအနေဖြင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်အပြောင်းအလဲနဲ့ဆိုကြသည်။ ထိုအခါခြုံငုံရမှတ်အတွက်အလုပ်အတွက်လိုအပ်သောသည်အဘယ်အရာကိုစစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက်။ ဒီစော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။ သင်တို့အဘို့အရုံအစွန်အဖျား သူတို့ရုရှားလုပ်သားများငှားရမ်းနေကြ.
ရာထူးအမြင့်ဆုံးလေကြောင်းလိုင်းအကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်များကိုပူဇော်ကြောင်းသက်သေပြ။ စိတ်၌ဤအတူကျနော်တို့လုပ်ခအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။ ထိုမှတပါး, ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသည်ဤအလုပ်အကိုင်များဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကညာဘက်ကိုရဖို့ CV ကိုလုပ်မယ့်ဇိမ်ခံပေးရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးပုံပေါ်ရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါယူအေအီးနှင့်အတူကာတာနိုင်ငံ, ကူဝိတ်နှင့်စင်္ကာပူကိုမြင်ရဖို့ scroll down ပါ။ ကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းဆုံးလေကြောင်းလိုင်းစော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်။ ငါတို့သည်မိမိတို့၏ခြုံငုံအလုပ်နေရာချထားရမှတ်များကအမိန့်သွားလာရန်လွယ်ကူသောအတွက်အဆင့်။
သငျသညျကုမ္ပဏီများသည်တစ်ဦးဖြတ်လမ်းများအောက်တွင် သင်သည်သင်၏ CV ကိုပေးပို့သင့်ပါတယ်။ စိတ်၌ဤအတူဆင်း scroll နှင့်သင်အများကြီးပိုဖော်ပြချက်မြင်လိမ့်မည်။ ဒီတော့စော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်းများအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူတို့သည်သင့်အဘို့အမှန်လျှင်။ သငျသညျအွန်လိုင်းလျင်မြန်စွာလျှောက်လွှာဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့် အပြုသဘောရလာဒ်များအရ တစ်ဦးဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုလေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များမှာ။ ကုမ္ပဏီအမည်နှင့်လျှောက်လွှာ link ကိုကိုအောက်တွင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
Air ကိုအလုပ်အကိုင်များ Go
အဘယ်ကြောင့်စော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်း Careers လျှောက်ထားရန်ထိုက်တန်ပါသလဲ
ဤသည်နေ့ရက်ကာလ, အလုပ်ရှာဖွေသူများအများကြီး။ ရှာဖွေနေ မြင့်မားသောပေးဆောင်အလုပ်အကိုင်များများအတွက်။ သာအကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီများမှကြောင်းပေးနေကြသည်။ ထိပ် 10 စော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်း Careers အခွင့်အလမ်းများ။ $ 150,000 တစ်နှစ်ကျော်ကအလွယ်တကူဖြစ်ကြသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကိုလည်းအမှုဆောင်အရာရှိငှားရမ်းသည်။ ထိုမှတပါး, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီဒီမှာပါ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုကျော်လာပင်ဒူဘိုင်းပျံသန်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းမျှော်လင့်နေပါတယ် သင်သည်သူတို့၏ဝန်ထမ်းဖြစ်လာကူညီဖို့ရန်သင့်အားကူညီပေးနေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့၌တည်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လူများနိုင်သမျှများများရဖို့ပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရရင် ဒါကြောင့်အချိန်ယူပြီးရဲ့အံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေရာတွင်။ လေကြောင်းလိုင်းအလုပ်အကိုင်များကိုကျော် 80% ပါ။ သငျသညျကျွမ်းကျင်မှုတွေအများကြီးသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာတစ်ခုမှာဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအမှုဆောင်အရာရှိဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်အတူ။ အလားအလာရှိသောကုမ္ပဏီများသည်ရာနှင့်ချီဒါ သင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ငှားရမ်းနိုင်သူ.
သို့သော်သာသူတို့ထဲကတစ်ဦးအနည်းငယ်ရွေးချယ်ထားသည့်ရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ထိပ်တန်း 20 သို့မဟုတ်သူတို့ထဲက 30 နှင့်အတူသွားရလိမ့်မည်ဆိုပါကသင်သိရလို့ပဲ။ ထိုလမ်းသည်သင်၏ ကတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်းဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေတာ၏အခွင့်အလမ်း။ ငါတို့ကဲ့သို့ နေရာ အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများ။ အကောင်းဆုံးကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်အခြေစိုက်သည်မှာအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ ၏သင်တန်းကာတာနိုင်ငံအတွက် ဆော်ဒီအာရေဗျ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုလေကြောင်းလိုင်းများ တစ်ဦးဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်များကိုသင့်ရဲ့အဓိကစာချုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်.
ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဒီလိုမျိုးအတွက်အလားအလာရှိသောဝန်ထမ်းအဖြစ်။ သငျသညျကြီးမားဝင်ငွေ generate နှင့်အံ့သြဖွယ်အသက်တာကိုစတင်နိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ငွေစု ကျိန်းသေကလျော့ကြလိမ့်မည်ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-of နထေိုငျရလိမျ့မညျ။ ဒါဟာကောင်းပါတယ်ကုမ္ပဏီများဟုဆိုရန်ခက်ခဲပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့၏ဖောက်သည်အံ့သြဖွယ်န်ဆောင်မှုများပေးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဖြစ်န်ထမ်းများနှင့်ကော်ပိုရိတ်ယဉ်ကျေးမှု၏စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်အထိ။ ဒီတော့အခြေခံအလုပ်အကိုင်များကနေ start ကြကုန်အံ့။
အလွန်အတွက်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ အလုပျသမားမြားအတှကျအတိုညှပ်။ သငျသညျလေကြောင်းလိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့အကောင်းဆုံးအဆင့်ဆင့်ဖေါ်ပြသည်။ စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လတ်ဆတ်တဲ့ချဉ်းကပ်မှုကနေ။ ကြောင်းအားလုံးအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ဖြစ်၏။ ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်း့အဆင့်အထိကွာခြားမှုဖြစ်ပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍများအဘို့ကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်လိမ့်မည်မျှော်လင့်များအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီလိုမျိုးအကြောင်းနည်းနည်းပိုထွက်ရှာတွေ့.
သငျသညျအံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။ Entry-level ကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းသငျသညျဝင်ငွေမယ်လို့ဘယ်လောက်အကြောင်း။ အထူးသဖြင့်လေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတူ ကားများအလုပ်အကိုင်များ။ ဒီတော့ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အသငျသညျရှာတှေ့နိုငျအခြေခံအကျဆုံးအလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ်များမှာ အံ့သြဖွယ်ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ, အိမ်ဖော်အဖြစ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသန့်ရှင်းရေးနေကြသည်။ နှင့်ဖောက်သည်ပုံပြင် salespeople ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, အခြေခံဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဝန်ထမ်းသွားကြဖို့ကောင်းပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့သည်သင်တို့နည်းနည်းပိုကောင်းတဲ့လမ်း browse ။ သူတို့ကလက်မှတ်တွေရောင်းနှင့်အထွေထွေပစ္စည်းပစ္စယဝန်ထမ်းနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးလေကြောင်းလိုင်းအရောင်းရဆုံးအဖြစ် ရုံးများနှင့်ရုံးစီမံခန့်ခွဲမှု.
ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သင့်ကိုယ်သင်ရနှင့်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုရောင်းစတင်နိုင်ပါသည်။ သာအပြုသဘောဘက်မှအင်တာနက်ကြီးထွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်, သင်ရပါလိမ့်မယ် အလုပ်လုပ်ရန်ကောင်းတစ်ဦးနှင့်အကောင်းတဲ့အရပ်ဌာန။ ဒီတော့သင်ရုံးမှာအလုပ်လုပ်နိုင်မယူဆကြကုန်အံ့။ နှင့်ရေရှည်အတွက်, သငျသညျသစ်တစ်ခုန်ထမ်းများအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အလွန်အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများကို setting ကိုစတင်ပါ။ အလွန်ကောင်းသည် entry ကိုအဆင့်မှာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများငှားရမ်းကြသည် ကားများ။ ယခုလေကြောင်းလိုင်းကြောင့်ဖြစ်သည် တူရကီရှိအခြားကုမ္ပဏီများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်ကုမ္ပဏီများ.
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအတွင်း entry level ကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ
ယင်းအသီးအသီးအဘို့အတစျရာကျြောန်ဆောင်မှုရှိပါတယ် သငျသညျအလုပ်မလုပ်နိုင်သောကုမ္ပဏီများသည်။ ကြောင်း၏ဥပမာတစ်ခုမှာအများဆုံးကိစ္စများတွင်အခြားသူများကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်အလုပ်အကိုင်အလုပျသမားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မလူတိုင်းအတွက်ထိုသို့ပြုမှကောင်းယူလိမ့်မည်လုပ်ဖို့ဒီတော့ခက်ရဲ့ရိုးရှင်းစွာအကြောင့်။ ကျောက်ပြားပျော်စေနှင့်အမှိုက်ထုတ်ကိုယူပြီး။ သို့မဟုတ်ပင်ကြမ်းပြင် polish ။ ဒါကင် သင်တစ်ဦး entry ကိုအဆင့်ကိုမြျှောလငျ့နိုငျကြောင်းအလုပ်အကိုင်များ။ သငျသညျအံ့သြဖွယ်ပညာရေးရှိပါက၏သင်တန်း, သင်ကလေ့ကျင့်ရေးမန်နေဂျာအဖြစ်စတင်နိုင်ပါသည်။ စိတ်၌ဤအတူ, သင့်လုပ်ခတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့မူကားတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောအရာအဘို့မတတ်နိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်အဘူဒါဘီအတွက်ဒူဘိုင်းမြို့အတွင်းလုပ်အားခနှင့်အတူ။ ကျိန်းသေကြောင့်မသွားရကျိုးနပ်သည်တစ်ဦးဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူလေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များ Emirates ။
အခြေခံအဆင့်ကိုအလယ်တန်းပြီးနောက် Next ကိုအဆငျ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအခွင့်အလမ်းများ။ နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဒီလိုမျိုးထဲမှာသင်တစ်ဦးအဆင်ပြေခွအေနကေိုဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်သင်လိုအပ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ကြီးထွားဖို့။ လေကြောင်းလိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါသည်လည်းကြီးထွားပြီးတော့အနာဂတ်မှာကြီးထွားဖို့မျှော်လင့်ထားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသငျသညျ4နှစ်ပေါင်းန်းကျင် 10 အဘို့ဤအနေအထားကိုငါပေးမည်။ တဖန်သင်တို့အောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးသည်။ မဆိုစွန်သင်သည်လည်းဖောက်သည်များအစေခံရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဖွစျလိမျ့မညျသောကြောင့် Entry-level ကိုနှင့်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအကြား ဒါကြောင့်။ ငါညွှန်ကြားရေးမှူးပျဉ်ပြားမှသတင်းပို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဖြစ်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်မန်နေဂျာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာများ, စစ်ဆင်ရေးဒါရိုက်တာများ။ ထိုလူအားလုံးသင့်ရဲ့တာဝန်စစ်ဆေးနေပါလိမ့်မည်။ သင်သည်ထိုနေ့ကဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့ကူညီပေးနေ။ သို့သော်ငြားလည်း, သင့်ရဲ့ကြီးကြပ်မှုအောကျကလူကိုဆိုလို၏။ ဒါဟာသင်နေဖြင့်စီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်ပါတယ်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့သင်က 8 နာရီအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ယူဆကြကုန်အံ့။ သငျသညျအိမျပွလေကြောင်းလေယာဉ်တင်သင်္ဘောယူနောက်ထပ်နှစ်ခုအကျိုးကိုခံရလိမ့်မယ်။ လေကြောင်းလိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်မန်နေဂျာထက်ပို 80% ။ 10 နှစ်အတွင်းညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်ရာထူးရောက်ရှိ။ ကုမ္ပဏီများအများစုကြောင်းဂုဏ်ယူနေကြသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသစ်ညွှန်ကြားရေးမှူး Entry-level မှာစတင်သည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများပင်ကြော်ငြာများထောက်ပြသည်။ သူတို့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌသော။ ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကအတွက်လက်တွေ့လက်ထောက်အဖြစ်စတင်ပါ။ ဒီတော့နေပါစေကိုယ့်ကိုယ်သက်သေပြအဘယ်သို့အနေအထား။ ထိုအရပ်၌ဖြစ်ပါသည် သင်ပင်ပါကစ္စတန်မှ လာ. အဘယ်အရပ်နေပါစေ။ ထို့ပြင်တောင်အာဖရိကသို့မဟုတ် ဆော်ဒီအာရေဗျ။ လေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတူအခွင့်အလမ်းရှိသည်သောလူမျိုး၏ဒါမှမဟုတ်ပင်ဖိလစ်ပိုင်အားလုံး စက်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များကိုအခွင့်အလမ်းများ။
စီမံခန့်ခွဲမှု Careers ၏အကြီးတန်းအဆင့်အထိ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကုမ္ပဏီတွေရဲ့တစ်ဦးကအများကြီး။ အမှန်တကယ်နေရာထိုင်ခင်းပေးထားပါသည် သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းများအတွက်။ သူတို့နိုင်ငံခြားသားတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုလက်မှတ်တွေပျံ။ သား၏အဘို့ပညာရေး။ နှင့်အံ့သြဖွယ်သင်ဘဝခံပါမည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အကြောင်း၌သင်တို့ကိုရဖို့သင်တစ်ဦး Laptop နဲ့အားကစားကားတစ်စီးပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်လေကြောင်းလိုင်းအလုပ်အကိုင်များကိုသွားကြဖို့ကောင်းသောနှင့်စောင့်ဆိုင်းရန်ထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။ အကယ်. သင်က BMW ကားနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစားထိုး။ ဒါမှမဟုတ်ပင် Bentley နှင့်အတူ။ ရေကူးကန်နှင့်အလယ်အလတ်အရွယ်အိမ်။ သူကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုသိတယ်ဟုပြောရပေမည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်ပင်ပိုမိုမြင့်မားတိုးတက်လိုလျှင်။ တစ် စီအီးအို သို့မဟုတ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားအဆင့်အထိရှိပါတယ်။ ဒါဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံအဆငျ့ပါပဲ။ လူတွေကလည်းတကယ်လေယာဉ်ပျံရာအရပ်လည်းမရှိ။ VIP Drive ကားများအမှုဆောင်အရာရှိများနှင့်ပင်ကိုယ်ပိုင်ရဟတ်ယာဉ်ရှိခြင်း။
ဒါကြောင့်သင်ကကြီးမားသောရေကူးကန်နှင့်အတူအလုပ်ရှာနေလျှင်။ ထိုအခါသန်းကဲ့သို့အံ့သြဖွယ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့။ သင်အမြဲလုပ်နိုင် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီမှ get။ တော်တော်များများရှိပါတယ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအလုပ်တစ်ခုရဖို့သူကိုနိုင်ငံခြားသားများ။ ပြီးတော့ဘဝရဲ့အလွန်ကောင်းသောအဆင့်ကိုစွန့်ခွာ။ ဒီကိုစိတ်ထဲနှင့်အတူကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာနေကြသည် အင်ဒီးယန်း နှင့် ပါကစ္စတန်။ ဒီနိုင်ငံကလာရင် သငျသညျကျိန်းသေအကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်မရသင့်တယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ကြီးထွားဖို့ပိုကောင်းနည်းလမ်းတွေရှာဖွေနေလျှင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သငျသညျပင်လေယာဉ်မှူးဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ အကြီးတန်းအဆင့်နောက်တစ်ခုရှိသေးသည် စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်များ လေကြောင်းလိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်း၌တည်၏။ မြင့်မားသည် ကမ္ဘာအဝှမ်းမှပေးဆောင်အလုပ်နေရာလွတ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အကြီးတန်းလေယာဉ်မှူးပိုက်ဆံတန်ချိန်အောင်။ သို့မဟုတ်စစ်ဆင်ရေးမန်နေဂျာအဖြစ်ခရိုင်မန်နေဂျာ။ နှစ်ဦးစလုံးအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကောင်းသောငွေရှာနေကြသည် ?. အကြောင်း, သင်တန်း၏, ထိုသူတို့အကောင်းတစ်ကားကိုမောင်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ပိုက်ဆံကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏကြောင်းကိုဤအပိုင်း၌တည်၏။ ဘီလျံနာဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်လေကြောင်းလိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ၏အများစုမှာ။ နှင့်သင်တန်း၏, ကြီးမားတဲ့လည်းမရှိ နိုင်ငံသားခြားနားချက်။ အမေရိကန်တွေအဖြစ်ကနေဒါနိုင်ငံသားတစ်တွေအများကြီး။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲကနေထိုမှတပါး, အာရပ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများယေဘုယျအားဖြင့်အတူ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီလိုမျိုးစီမံခန့်ခွဲ။ တောင်မှသူ့ရဲ့ဖွဲ့ရှိတ်မိုဟာမက်ဘင် Rashid ကြောင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိခြင်း။ ငွေနှင့်သင်တန်းတွေအများကြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီလိုမျိုး။ ၎င်း၏နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးထိတွေ့မှု၏ကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းကသိတယ်နဲ့ငွေရှာ။ လူများ၏အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ် အဲဒီမှာအလုပ်လုပ် လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်ပင်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်သိကြပြီမဟုတ်။ အစိုးရကအလုပ်လုပ်သူတွေကိုသာရာခိုင်နှုန်းသိတယ် တစ်ဦးသင့်လျော်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါမယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီလိုမျိုးအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာရန်။ သင်ကအတိတ်ကာလကွဲပြားခြားနားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ လူအတော်များများပင်လူတစ်ဦးအတွက်မသိရပါဘူး။ ထိုအသေချာများအတွက်မည်မျှသောဤ လူထု လုပ်နေတယ် အစိုးရကိုတောင်းဆိုသည့်လူ ဦး ရေရာခိုင်နှုန်းကသာဤအရာအားလုံးမည်သို့လည်ပတ်နေသည်ကိုသိသည်။ ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပဲလိုတယ်။ အတိတ်ကာလ၌သင်၌ကွဲပြားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိရန်လိုအပ်သည်။ သောကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖွဲ့စည်းပုံ။ နှင့်အညီ, သဘောတူညီချက်၏ဤမျိုးအတွက်အလုပ်။ အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော်သင်သည်ထိုအစိုးရနှင့်ခေါင်းစဉ်နှင့်အခြားပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသေချာဖို့လိုတယ် သင်သည်လက်ျာလူတစ်ဦးရှိပါတယ်။
No.1 စော်ဘွား Group မှ Careers
အဆိုပါစော်ဘွားအုပ်စုတစ်စု အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေသူငှားရမ်းသည်။ ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိဒီကုမ္ပဏီအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်၌ဤအတူကြောင့်သူတို့ထံမှတစ်ဦးအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရဖို့ထိုက်တန်ကြလိမ့်မည်။ စော်ဘွားကုမ္ပဏီများအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တစ်ကြိမ်သာလျှောက်ထားအဖြစ်။ သင်ကရပါလိမ့်မယ် အတော်ကြာကုမ္ပဏီများနှင့်သင့်လျှောက်လွှာ။ ရေရှည်မှာမှာတော့အဲဒါကိုတန်ဖိုးရှိဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသည်မြဲမြံစွာယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်ဤကုမ္ပဏီကိုစတင်ယခုအချိန်တွင်။ သငျသညျခံစားမိပါလိမ့်မယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ပါဝါ.
လည်းကျိန်းသေဒူဘိုင်းပျံသန်း အဆိုပါတိုးတက်သောအဖှဲ့အစညျး၏တဦးတည်း။ flydubai အားဖြင့်သင်တို့ကိုယေဘုယျအားဖြင့်အလုပ်အကိုင်အသတိပေးချက်အဘို့အ sign up ကိုမပြောတတ်နိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာဖြည့်စွက်။ ထိုမှတပါး, သင်၏ CV မှတ်ပုံတင်ရန်။ ထိုအပင်၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုမှာကြည့်ရှိသည်။ သငျသညျအကူညီပံ့ပိုးမှုရှာနေမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အ။ တစ်ဦးဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုလေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များကစမတ်စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ အတိအကျ, ဒီကုမ္ပဏီကိုသင်ကူညီပေးရန်ရှာဖွေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်, သင်လည်းသင့်ရဲ့ updated ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload တင်သင့်ပါတယ်။ ထိုအခါအချို့အလုပ်သတိပေးချက်များကို set up ။ ဒီကုမ္ပဏီကြောင့်ရေရှည်မှာ၌သင်တို့ကိုနေရာချမည်ဟုကြောင့်ဖြစ်သည်။
No.3 Air ကိုအာရေဗျ Careers
Air ကိုအာရေဗျစိတ်ဝင်စားအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုပေးပါသည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီတကမ္ဘာလုံးအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှု orientated နေကြသည်ပေးအလုပ်အကိုင်များ။ သင်သည်အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုများ၌သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုရှာဖွေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင် Air Arabia ကုမ္ပဏီတစ်ခုကမင်းကိုငှားမယ်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီ HR မန်နေဂျာများကသင့်အားသင်၏အကောင်းဆုံးကိုလိုချင်နေကြသည် အလုပ်ရှာဖွေနေ။ ၄ င်းတို့နှင့်စတင်ရန်သင်သည် apply ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုအခါရာထူးမဆိုဘို့ရှေးခယျြခဲ့။ ထို့နောက်အဆုံး၌, သင် Now ကို Apply button ကို click နိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီမန်နေဂျာအလုပ်ရှိနိုင်ပါသည်။ အဖြစ်ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနှင့်အင်ဂျင်နီယာအတွက်အရောင်းမန်နေဂျာ တူရကီနိုင်ငံအနေအထား။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းသို့မဟုတ်ဥရောပ၌တည်၏။ စော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်း Air ကို Abarbia ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ ccareer ။ ကျိန်းသေကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်လိမ့်မည်။
Emirates လေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များ - Air Arabia အလုပ်အကိုင်များ
No.4 Air ကိုအိန္ဒိယဂျော့ဘ်နှင့် Careers
Air ကိုအာရေဗျစိတ်ဝင်စားအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုပေးပါသည်။ ကုမ္ပဏီများကိုအဆိုပါအလုပ်အကိုင်များကိုတကမ္ဘာလုံးအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှု orientated နေကြသည်။ နေစဉ်တွင်သင်တို့ကို အလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှု၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားရှာတွေ့။ ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးလေကြောင်းအာရေဗျကုမ္ပဏီအသစ်ကအလုပျသမားငှားရမ်းစကားပြောခြင်း။ သင်တန်းကိုလည်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။ စော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များ တစ်ဦးဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီတစ်စမတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အတူ။ ယခုအချိန်တွင်သငျသညျဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တဖဲ့စစ်ဆေးပါ။ ပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီအတွက်သက်ဆိုင်ပါသည်။
No.5 Wizz Air ကိုဂျော့ဘ်နှင့် Careers
အဆိုပါ Wizz Air လေကြောင်းလိုင်းကုမ္ပဏီစော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များလည်းငှားရမ်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သူတို့အလုပ်အကိုင်သုံးမျိုးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ပါတယ်။ ပထမဆုံး သင်ပင်ပိုလန်အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း။ အခန်းအမှုထမ်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျရုံးအလုပ်အကိုင်များရပါလိမ့်မယ်။ ထိုကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည် စစ်ဆင်ရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာန။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဒီလိုမျိုးတွေနဲ့သေချာဘို့, သင်စာတမ်းများနှင့်ကွန်ပျူတာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လိမ့်မယ်။ ထိုအ Wizz Air လေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတူတတိယ option ကိုတစ်ဦးလေယာဉ်မှူးဖြစ်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ဒီဟာအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့လေယာဉ်မှူးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြို့မြို့တို့မှပျံသန်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ နှင့်သင်တန်း၏, ကုမ္ပဏီ ဥပဒေပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်းနှင့်သင်တန်းများပံ့ပိုးပေး။ ဒါကြောင့်ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကဒီကုမ္ပဏီကိုလျှောက်ထားရန်သင့်အားအကြံပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အဲဒါကိုဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူတိုင်းမိနစ်တန်ဖိုးရှိပါလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ တစ်ဦးနှင့်အတူစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုလေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များ WizAir အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုစတင်နိုင်ရန်ကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်။
No.6 ဗြိတိန်လေကြောင်းလိုင်း Careers
စော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များများအတွက်နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းကုမ္ပဏီနှင့်အတူဤအချိန်။ ဗြိတိန်လေကြောင်းလိုင်းလန်ဒန်, ဒူဘိုင်းနှင့်နယူးယောက်မြို့များတွင်ငှားရမ်း, ကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီတော့ရှာဖွေနေ တစ်ဦးကောင်းကုမ္ပဏီလုပ်ကိုင်ဖို့တစ်လမ်းဖြစ်၏ သူတို့အတွက်။ ဒါကကုမ္ပဏီယေဘုယျအား Heathrow လေဆိပ်များတွင်ငှားရမ်းစကားပြောခြင်း။ ဗြိတိန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှတ်ရစရာဖောက်သည်အတွေ့အကြုံများအောင်ပါဝါရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကို၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်လျှင်။ နေရာတိုင်းမှာသူတို့ကမြေပြင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်လေထုထဲမှာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သငျသညျရှိနိုင်ပါသည် သူတို့နှင့်အတူအကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်း။ သငျသညျအလုပ်အမှုဆောင်သို့မဟုတ်လောလောလတ်လတ်ဘွဲ့ရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကြုံတွေ့နေကြသည်ရှိမရှိ။ သို့မဟုတ်ပင်သင်ရုံဗြိတိန်အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းထွက်စတင်ဖွင့်သင့်သည်ဗြိတိသျှလေကြောင်းလိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကွိုးစားသငျ့တယျ။
No.7 Etihad အလုပ်ရှာဖွေရေးလေကြောင်းလိုင်း
ဒါကြောင့်လေယာဉ်အမှုထမ်းအလုပ်အကိုင်များကနေမဟာဗျူဟာနှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအလုပ်အကိုင်များအဖြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလေယာဉ်မှူးထည့်သွင်းနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသယ်ဆောင်မှတက်မ ဒီကုမ္ပဏီကျိန်းသေအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းအခွင့်အလမ်းများပေးလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီ၏အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ နှင့်သင်တန်း၏, စီးပွားရေးအရှေ့အလယ်ပိုင်းအကြားဧညျ့လုပ်ငန်းစင်တာမှအပေါ်အခြေခံသည်။ သငျသညျကလူအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်အကြောင်းကိုအသည်းအသန်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်။ ဒါကကုမ္ပဏီကျိန်းသေသင်္ဘောသား၏လုပျငနျးအဖှဲ့ကအကောင်းဆုံးသောအရပ်တို့ကိုမတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးရှေ့ပြေးသို့မဟုတ် SFI အဖြစ်အလုပ်ရနိုင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်း.
နော်ဝေကအခြားဖြစ်ပါသည် အလုပ်ကောင်းကုမ္ပဏီတခု။ ဒီအဖွဲ့အစည်းကကမ္ဘာ့နောက်ဆုံးပေါ်လေယာဉ်တစ်စင်းစင်းကိုတဦးတည်းရှိတယ်လို့ပဲ။ ထိုမှတပါး, 260 ကျော်သစ်ကိုလေယာဉ်ပျံအမိန့်ထုတ်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကြောင့်စာရင်းဇယားအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ ဒါဟာဖို့ထိုက်တန်ပါလိမ့်မည် HR စီမံခန့်ခွဲမှုကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ထိတွေ့ရ။ နော်ဝေလေကြောင်းမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်အတွက်ကုမ္ပဏီအတွင်းရာပေါင်းများစွာသောသစ်ကိုဖွင့်များ၏တောင်းဆိုမှုကိုစီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်။ ဒါကကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့ join ဖို့ပိုပြီးလူတွေလိုအပျကွောငျးကိုဆိုလိုသည် နော်ဝေမိသားစု။ နှင့်သင်တန်း၏, သင်သည်ထိုသူတို့၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏လျှင်။ ရှေ့ဆက်ပြီးဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူလေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များ Emirates သင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်။
No.9 GoAir လေကြောင်းလိုင်းအလုပ်အကိုင်
ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်သွားကြည့်တာပေါ့ အိန္ဒိယ ကုမ္ပဏီ။ ဒီကုမ္ပဏီဟာ အိန္ဒိယအတွက်အလွန်ကောင်းသောကုမ္ပဏီ ၎င်း၏အမည်ကိုလေကြောင်းလိုင်းအိန္ဒိယလီမိတက်သွားပါ။ ဒါဟာအိန္ဒိယအုပ်စုများအတွက်တစ်ဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်င်နှင့်၎င်းတို့၏မစ်ရှင်လုံခြုံလုံလုံခြုံခြုံနဲ့အကျိုးရှိစွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့န်ထမ်းများနှင့်ဖောက်သည်များ၏အလုံးစုံတို့အဘို့။ အဖြစ်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်သူတို့ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် client ကိုနှင့်အတူတာဝန်နှင့်အပေးအယူပေါင်းသင်းအာရုံကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း။ ထိုသူတို့ကတတ်နိုင်ပါတယ် ထူးခြားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုဖန်တီးရန်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောလူများနှင့်၎င်းတို့၏ကော်ပိုရိတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဘို့, စကားပြော။
No.10 KLM တော်ဝင်ဒတျချြလေကြောင်းလိုင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်သုံးသပ်ကြောင်းနောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ KLM ဤ ကုမ္ပဏီအမှန်တကယ်ငှားရမ်းဖြစ်ပါတယ် ဗိသုကာအဖြစ်မြေပြင်ဝန်ထမ်းများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အတွေ့အကြုံကောင်းနှင့်အတူလူ။ သငျသညျယေဘုယျအားဖြင့်အလုပ်အကိုင်အသတိပေးချက်စကားပြောအပေါငျးတို့သနညျးလမျးမြားကို set up နိုင်ပါတယ်နှငျ့သငျတော်တော်များများသောနေရာများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာအမေရိကန်နိုင်ငံဥရောပကနေဒါအဖြစ်နှင့်သင်တန်း၏, သင်တန်း၏, ကျနော်တို့ကဆိုလို။ ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုပ်ရရန်ကြိုးစားရန်အကြံပေးကြသည်။ ဒါဟာဖြစ်စေခြင်းငှါ, အိန္ဒိယကနေရှာတွေ့လုပ်ဖို့အတော်လေးခက်ခဲ နှင့်ပါကစ္စတန်။ သို့သော်ဒူဘိုင်းနှင့်တောင်အာဖရိကမှသင်တန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားများ၏ရဖို့အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။ အလုပ်တစ်ခုရလိမ့်မယ်နဲ့ကောင်းတဲ့လုပ်ခလစာပေးချေမည်ဖြစ်သည်။
အခုတော့ဗာဂျင်းအတ္တလန္တိတ်များအတွက်အချိန်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီကဒီကုမ္ပဏီ အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးပေး ဥပမာအားဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်လေဆိပ်န်ဆောင်မှုအနေဖြင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာမှပါ။ သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူသူတို့ရှိနေကြောင်း, မဟာအခွင့်အလမ်းများအားလုံးရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ သင်လုပ်နိုင်သည် အမြဲတမ်းအလုပ်ရ ဦးခေါင်းရုံး၌တည်၏။ ထိုအခါစီမံခန့်ခွဲမှုအနေအထားကနေ, သင်သည်ဤပြန်လည်သုံးသပ်လို့ရပါတယ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနှင့်သင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် သင်ပါရမီလူတစ်ဦးလျှင်ထိုနည်းတူနောက်ကွယ်မှသင်အခန်းကဏ္ဍအမျိုးမျိုးရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့စူပါထံမှမပိုမောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံကုန်တင်ရှိသည်နှင့်သင်မည်။ ဖြစ်နှင့်သင်တန်းများ၏မည်သည့်နှင့်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု။
သို့သော်ငြားလည်း, သင်တစ်ဦးဦးဆောင်မှုအနေအထားရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သင်သူတို့ကိုယ်သူတို့တိုးတက်သူတွေကိုဦးဆောင်နှင့်ဆုချီးပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ကျနော်တို့အင်ဂျင်နီယာနှင့်စစ်ဆင်ရေးရှိသည်။ နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ဒီအလုပ်ညာဘက်ရဖို့။ သင်တစ်ဦးအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါအလုပ်အကိုင်များအများစုလန်ဒန်မြို့တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ကျနော်တို့ပျံသန်းသောသူအနာဂတ်လေယာဉ်မှူးများနှင့်လူဦးရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အရှိဆုံး updated လေယာဉ်ပေါ်ပျံတက်။
ဂျက်လေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတူလေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များ Emirates ။ ကောင်းပြီ, ဂျက်လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ် လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်ပျံသန်း။ သင်ဤကုမ္ပဏီနှင့်အတူ Arkansas ပြည်နယ်အများအပြားရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိသေး၏။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးလေယာဉ်စစ်ဆင်ရေးအကြီးတန်းရနိုငျသညျ, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းများကိုအောက်မှာ။ အဖြစ်ကောင်းစွာပထမဦးဆုံးအရာရှိတဦးအဖြစ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လေယာဉ်ပျံသန်းဖို့ကျနော်တို့အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုရှိသည့်အတိုင်းကောင်းစွာအဖြစ် စစ်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ကုမ္ပဏီအတွင်း။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ပင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် သူနာပြုအလုပ်များ။ အဖြစ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုစစ်ဆင်ရေးအဖြစ်။
ဒီတော့ဒါဟာကုမ္ပဏီရဲ့ပေးသွားမှာပါအလုပ်အကိုင်အပေါငျးတို့သရင်ဆိုင်ရပါစေ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုရဖို့ထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။ သင်အကြီးတန်းအနေအထားအရပင်လျှင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဂျက်လေကြောင်းလိုင်းဒါကြီးတွေကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ ပို. ပင်အခွင့်အလမ်းများအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးလိမ့်မည်။ ထို့အပွငျသင်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပေးနိုင်သည်။ ထိုအမြင့်မားပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်လာသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကူညီပေးနေဒါ, ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ။ သူတို့နှင့်အတူ get ဖို့အောက်ကပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် ဒီကုမ္ပဏီမွန်ဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ပြီးပြည့်စုံ။ ရှိလျှင်ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦးသည်အိန္ဒိယစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျကျိန်းသေဒီကုမ္ပဏီတစ်ခု CV ကိုပေးပို့သင့်ပါတယ်။
No.13 ကူဝိတ်လေကြောင်း Careers
ကူဝိတ်လေကြောင်းအလုပ်အကိုင်များနှင့်အတူလေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များ Emirates ။ ကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်အခြားကုမ္ပဏီ။ ကူဝိတ်လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်မှာသင်သည်တတ်နိုင်သောကြောင့် အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းယဉ်ကျေးမှုစူးစမ်း။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီနေရာလွတ်တွေအများကြီးပေးပါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားဥပမာအားဖြင့်, ယေဘုယျအားနေရာလွတ်။ သင်ကဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူစတင်နိုင်ပါသည်တစ်ဦးလေယာဉ်မှူးဖြစ်လာဖို့ရှာနေမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်လာကြ၏။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျဘဏ္ဍာရေးအလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများကိုရယူလိုသို့မဟုတ်လျှင်ပင် ဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရိတ်နည်းပညာ နေရာလွတ်သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အရနိုင်ကြသည်။ နောက်ဆုံးငါတို့သည် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အလုပ်အကိုင်များနှင့်စစ်ဆင်ရေး။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဒီကုမ္ပဏီကိုပင်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအနေအထားများအတွက်ငှားရမ်းသည်။ သေချာများအတွက်ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီဤ website မှအလုပ်ရှာဖွေသူများမောင်းနှင်နေသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်တော်ပေးနိုငျအလုပ်အကိုင်ကိုသိသောကြောင့်။ သငျသညျအလုံအလောက်ကောင်းသောကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ငွေကောင်းသောငွေပမာဏစေ။
No.14 Air ကိုမော်လ်တာဂျော့ဘ်
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မိတ်ဆက်ပေးလိုသောအခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ Air Malta ဖြစ်သည်။ ဒီကုမ္ပဏီယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်, စုဆောင်းရေး ဥရောပရှိသေးငယ်တဲ့တိုင်းပြည်ကနေ။ ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်မည်သည့်အချက်မှာအလွန်ကောင်းသောစကားပြော။ ဒါကြောင့်သင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရချင်တယ်ဆိုရင် အလုပ်လုပ်အသစ်တစ်ခုအာကာသ။ Air ကိုမော်လ်တာအဖှဲ့အစညျးကြိုးစားပါ။ ရဲ့ဥရောပကဲ့သို့သင်တို့ယူဆနှင့်မော်လ်တာ၌သင်တို့အလုပ်လုပ်ကြစို့။ သေချာသငျသညျအကောင်းတစ်ဦးက start ပေး၏။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအစဉ်အမြဲမျှော်လင့်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများကိုကူညီခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးချင်းစီသစ်ကိုလူတစ်ဦး၏အလွန်ဂုဏ်ယူကြသည်ရန်။ မည်သို့ပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ sign up ကိုပါဘူး ?. သို့မဟုတ်စော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်း Careers မဆိုရန်။
Qantas တို့မှာ No.15 Careers
Qantas လေကြောင်းလိုင်းမှာအလုပ်ရှာဖွေရေး။ အခြား အလုပ်လုပ်ရန်အလွန်ကောင်းသောကုမ္ပဏီ။ ထိုမျှမကသာအစော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်း Careers ။ အခြားကုမ္ပဏီများအများကြီးလည်းမရှိ, အလုပျသမားမြားအတှကျအကောင်းရှိပါတယ်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, အလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက် Qantas တို့အဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရှာဖွေနေ။ သို့သော်အများဆုံးကိစ္စများတွင်အဖွဲ့ဝင်သစ်မြင့်တက်စံချိန်စံညွှန်းများအနေဖြင့်လိုအပ်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ပြီးတော့ ကွဲပြားခြားနားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုပြောင်းရွှေ့။ ဒါကကုမ္ပဏီဟာအလွန်ခက်ခဲတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ Airlane စျေးကွက်အပေါ်လုပ်ဆောင်နေပြိုင်ဘက်တစ်တွေအများကြီး။ Qantas တို့မကြာခဏသူတို့၏န်ထမ်းများထံမှအများကြီးမျှော်လင့်ထားသည့်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, စီမံခန့်ခွဲမှုမဖြစ်နိုင်တဲ့အောင်မြင်ရန်ခန့်မှန်းထားသည်။ အပြုသဘောဘက်တွင်ကုမ္ပဏီအမြဲသူတို့ရဲ့အသင်းမန်နေဂျာထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သင်ကြားရေး ဘယ်လောက်ကောင်းခေါင်းဆောင်မှုတူ။ ထိုမှတပါး, ဘယ်လောက်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူအခြားသူများကိုယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနှင့်အကြံပေးဖို့။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြည့်ရှိသည်။
Aegean မှာ No.16 Careers
Aegean ကော်ပိုရေးရှင်းသည်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုလေကြောင်းလိုင်းများအတွက်အခြားကုမ္ပဏီတခု အလုပ်အကိုင်များ။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ဒီကုမ္ပဏီအမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိကနေလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ သူတို့ရဲ့မစ်ရှင်ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများအကြားအကွာအဝေး minimalize ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကနေ ပိုမိုနီးကပ်စွာသင်သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လိုချင်တာတွေပေါ်တွင်သင်ရောက်စေဖို့ရှာဖွေနေ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အဲဒီမှာခရီးသွားများနှင့်ကျမ်းပိုဒ်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာသည့်ဝန်ဆောင်မှုများပေးဖို့ကြိုးစားနေ။ အဓိကစိတ်ကူးကိုလေးစားခြင်းနှင့်စျေးကွက်သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်ကသူတို့ရဲ့န်ထမ်းဖြစ်ပေါ်နေသောနှင့် ဒေသခံလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုထောကျပံ့ကူညီ။
12 ကတည်းကသန်း 2012 ကျော်ခရီးသည်ရှိပါတယ်ရှိသည်။ 145 နေရာများကျော်ပျံသန်းနှင့် သူတို့ကပိုထက် 1 ဘီလီယံကိုအခွန်ပါစေ။ 45 နိုင်ငံများရှိ။ ထို့အပြင်အဖွဲ့အစည်း၏ 89% နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူကူညီခြင်း။ အဆိုပါကုမ္ပဏီစတားမဟာမိတ်အဖွဲ့မိတ်ဖက်ဖြစ်ပြီးသူတို့ပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများကြီးချပြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ရာထူးအလွန်မကြာမီရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ နှင့်လာမယ့်န်ထမ်းများအတွက်ကြောင်း ကြီးထွားလာနေတဲ့ကြီးမားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေပါလိမ့်မယ်.
သြစတြီးယားလေကြောင်းလိုင်းမှာ No.17 ဂျော့ဘ်
သြစတြေးလျလေကြောင်းလိုင်းကိုလည်းစျေးကွက်မှာထိပ်တန်းကစားသမားများဖြစ်ကြသည်။ အခုအချိန်မှာ အများအပြားသိမ်းပိုက်လယ်ယာငှားရမ်းကုမ္ပဏီ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ထို aircrew အဖြစ်ခရီးသည်ဝန်ဆောင်မှုအေးဂျင့်, လေယာဉ်မှူး, နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ, ဦးခေါင်းရုံးနှင့်ပင်အလုပ်သင်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ငြားလည်း, ကုမ္ပဏီအကြံပေးချက်များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်တွေအများကြီးကိုထောက်ပံ့ပေး Emirates Airlines အလုပ်အကိုင်အတွက်သင်အသုံးပြုနိုင်တယ်။ သြစတြီးယားလေကြောင်းလိုင်း၏ဥပမာတစ်ခုမှာအံ့သြစရာဖြစ်သည် ဘလော့ဂ်။ သူတို့အဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့အဖွဲ့အကြောင်းသူတို့ရဲ့လေယာဉ်ပျံအကြောင်း၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကြည့်ရတာအံ့သြစရာကောင်းပါတယ် ကလူအများကြီးကြောင်းဘလော့ဂ်ကနေတန်ဖိုးရနိုင်။ ဒီတော့နည်းနည်းရှိသည်နှင့်ကသူတို့စာမျက်နှာဆီကိုခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်ပုံပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ကျိန်းသေရှေ့ဆက်ပြီးအလုပ်အကိုင်အများအတွက်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ကိုယ်အဘို့အလုပ်ရနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
တောင်အာဖရိကလေကြောင်းလိုင်းမှာ No.18 ဂျော့ဘ်
ထိုသို့လွယ်ကူသောသဘောတူညီမှုမရမယ့်တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေခြင်း။ ကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါးအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုနောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ။ အဆိုပါတောင်အာဖရိကလေကြောင်းလိုင်းများယေဘုယျအားဖြင့်ဒီကုမ္ပဏီစကားပြော Multi-ဆုရလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ တောင်အာဖရိက၌သင်တို့၏ Harrisburg အခြေစိုက်အဓိကဦးခေါင်းရုံး။ အဆိုပါကုမ္ပဏီတကမ္ဘာလုံး 78 နေရာများအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်ဒီလေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတူရဖို့ကြောင်းလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ သူတို့ကအကောင်းဆုံးငွေပေးချေမှုလေကြောင်းလိုင်း၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏အဖြစ်။ လူတွေအများအပြားတကယ်ကြိုးစားနေ သူတို့နှင့်အတူအလုပ်ရရန်။ ငါတို့သည်တောင်အာဖရိကတစ်ဗီဇာရဖို့အဖြစ်လွယ်ကူသည်မဟုတ်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ရန်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကတစ်ပါတ်အတွက်တိုင်းတခါသွားစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်။ ထိုသူတို့၏လက်ရှိနေရာလွတ်နှင့် ပတ်သက်. ထွက်ရှာတွေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူစတင်နိုင်ရန်စမတ်တစ်ဦးဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီလမ်းညွှန်မှုချုပ်ရိုးတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များ Emirates ။
အဖြစ်မှန်အတွက် Lufthansa ကုမ္ပဏီမည်သူမဆိုမှမိတ်ဆက်ပေးရမညျမဟုတျ။ ၏သင်တန်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကြီးမားဆုံးကစားသမားတဦး။ နှင့်ယခုအချိန်တွင်ဒီကုမ္ပဏီကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအထိစစ်ဆင်ရေး၏ပင်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအိုင်တီကျွမ်းကျင်သူထံမှအလုပ်အကိုင်တစ်တန်ရှိသည်။ ဖောက်သည်မန်နေဂျာအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သန့်ရှင်းရေးလက်ထောက်။ သေချာဘို့ဤကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သငျသညျနီးပါးမည်သည့်အလုပ်ရနိုင်သည်။ အဆိုပါသာအနုတ်လက္ခဏာဘက်သွားမယ့်အလွန်ခဲယဉ်းအင်တာဗျူးအဲဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, သငျသညျ very nice ဖန်ဆင်းသူတို့ရဲ့ website ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ တဖန်သင်တို့ပင်သင်၏လျှောက်လွှာအဆင့်အတန်းအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ တောင်မှအလုပ် subscription ကိုပုံရသည် အလုပ်ရှာဖွေသူများမှရရှိနိုင်။ စိတ်ထဲ၌ဤတစ်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုလေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များနှင့်အတူငါသည်လည်းသင်တို့အဘို့အမရရှိနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းမူကား,
ကျနော်တို့စာရင်း၏အောက်ဆုံးမှာသောအရပ်တို့ကိုသာကဒီကုမ္ပဏီကိုရှိသည်။ အဲဒါကိုအတော်လေးခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှဤတစ်ဥရောပကုမ္ပဏီသောကွောငျ့ ဥရောပအတွက်ဗီဇာရဖို့။ အပြုသဘောဘက်တွင်, ဒီကုမ္ပဏီလည်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အဲဂုတ္တုပြည်၌ပုန်းအောင်း။ နှင့်ယခုအချိန်တွင်စစ်ဆေးကြောင်းကျနော်တို့ကိုတောင်မတတျနိုငျအနည်းငယ်ကတခြားနိုင်ငံအများအပြားက။ သေချာအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအဘို့, ကာတာနိုင်ငံ နှင့်အမေရိက၏အမေရိကန်။
No.20 စင်္ကာပူလေကြောင်းလိုင်း Careers
စင်္ကာပူလေကြောင်းလိုင်းကြောင်းများစွာသောလူကဒီကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုဤနေရာတွင်ပါပြီမဟုတ်။ ဒါပေမဲ့ဒီကုမ္ပဏီကနောက်ဆုံး 20 နှစ်များတွင်ကြေးစားဖှံ့ဖွိုးတိုးတရှိပါတယ်။ အဓိက idea က ဝန်ထမ်းကသူတို့အပြည့်အဝအလားအလာတိုးတက်မှုနှုန်းအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်။ သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်သင်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအဘို့ကျယ်ပြန့်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီကုမ္ပဏီကိုကျော်ကပိုပေးလိမ့်မယ်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်မယ်လို့သင်သည်ရရန်သင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့နှင့်အတူမစတင်ချင်ပါတယ်တဲ့သူလူတိုင်းအတွက်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအီးအဆင့်မြင့်ပညာရေးအရည်အချင်းများသည်။ သင်တစ်ဦးကုမ္ပဏီရှာဖွေနေလျှင်ယေဘုယျအားဖြင့်ဟောပြောသည် အဘယ်သူသည်သင်တို့ကိုဗီဇာစပွန်ဆာပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျိန်းသေ, စင်္ကာပူလေကြောင်းလိုင်းသင်တို့အဘို့အကြောင်းပြုလိမ့်မည်။ သူတို့ကစော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်းများအလုပ်အကိုင်များများအတွက်သင့်လျော်သောတဦးတည်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူအဖြစ်လျှောက်ထားရန်ကျိန်းသေတန်ဖိုးရှိ။ သူတို့ရဲ့ website တွင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြည့်ရှိသည်နှင့်သင် အဲဒါကိုတန်ဖိုးရှိသို့မဟုတ်မယ့်လျှင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆုံးဖြတ်.
No.20 ကာတာလေကြောင်းလိုင်း Careers
အမ်းမရိတ်လေကြောင်းလိုင်းများအတွက်ကာတာနိုင်ငံ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်အကိုင်များ။ ကာတာနိုင်ငံအတွက်လက်ရှိအခွင့်အလမ်းများကိုရာပေါင်းများစွာ။ ဒါကကုမ္ပဏီကောင်းစွာသူတို့တကယ်ရှာနေနေနာရီခန့်လူသိများသည် မန်နေဂျာများနှင့် Business ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအလုပ်အမှုဆောင်များအတွက်s ကို။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာအသင်းအဖြစ်လေဆိပ်န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်များန်ထမ်းများ, လေယာဉ်အမှုထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် operating ။ ဒီကုမ္ပဏီ၏အပြုသဘောဘက်တွင်, သငျသညျပင်သင်၏လျှောက်လွှာအတွက်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ သငျသညျအနာဂတျမှာနေရာလွတ်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖြစ်သွားလျှင်အလုပ်သတိပေးချက်များထသတ်မှတ်မည်။ ယခုအချိန်တွင်မှာအတူသင်တို့သည်မတတျနိုငျရှိဖြစ်နိုင်ပါတယ်သောကြောင့် သငျသညျအမြိုးသမီးတအဖြစ်ရှာနေအလုပ်.
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သူတို့ကအမှန်တကယ်အနာဂတ်အဖြစ်ထောက်ပံ့ပေးသောတစ်ဦးတည်းသာရှိပါသည် အဆိုပါ website တွင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အခွင့်အလမ်း။ သေချာဘို့အဲဒါကိုရှေ့ဆက်သွားနှင့် 50 နေရာလွတ်မှတက်ကအနည်းဆုံး 200 လျှောက်ထားရန်ထိုက်တန်ကြလိမ့်မည်။ ကအလုပ်တစ်ခုရဖို့ကြောင်းလွယ်ကူသောမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, ဒီကာတာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ အမြောက်အများ တစ်ခုအံ့သြဖွယ်အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေနေကမ္ဘာတဝှမ်းကလူ ဤတိုင်းပြည်တွင်။ ဒါကြောင့်သင်ကအင်ဒီးယန်း, ပါကစ္စတန်နှင့်အခြားအရှေ့အလယ်ပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကိုယ်စားလှယ်များနှင့်စစ်တိုက်ခြင်းငှါရပါလိမ့်မယ်။
စော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်း Careers များအတွက်နိဂုံး
ဒီအပိုင်းမှာကျနော်တို့နိဂုံးလုပ်ပါ။ အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာလေကြောင်းလိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာရန်ရှာဖွေနေသည်လူများအများစုဒါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ငါလေယာဉ်မှူးအဖြစ်နှင့်မြေပြင်ပစ္စည်းပစ္စယပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်းခဲ့တာအလုပ်အကိုင်များအများကြီးစကားပြော။ လေကြောင်းလိုင်း ကုမ္ပဏီများကကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်လျှင်မြန်စွာကွန်ယက်ကိုတိုးချဲ့နေကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ယူအေအီးအတွက်ကုမ္ပဏီများမှ။ ယူနိုက်တက်ဒါယခုအချိန်အထိအမေရိကနှင့်ဥရောပစတိတ်နှင့်မည်သို့လျင်မြန်စွာလေဆိပ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကြီးထွားလာ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီလိုမျိုးတွေနဲ့တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်။ သင်သည်များစွာသောနယ်ပယ်များတွင်ရရှိနိုင်အလုပ်အကိုင်များစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ဝေးသငျသညျမဟာဗျူဟာနှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအလုပ်အကိုင်များထွက်ရှာပါ။
လေဆိပ်နှင့်ကွန်ရက်စစ်ဆင်ရေးအလုပ်အကိုင်များ။ နည်းပညာဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးအလုပ်အကိုင်များနှင့်အလုပ်၏အလွန်ဆင်တူမျိုး။ လေဆိပ်များတွင်လုံခြုံရေးကိုလည်းအတော်လေးကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့အရည်အသွေးမြင့်အလုပ်အကိုင်များရှိသည်။ လေယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလယ်ကွင်း။ ထိုအခါ အဲဒါကိုရဖို့လည်းထိုက်တန်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအလုပ်အကိုင်များ။ အလုပ်အကိုင်အများစုကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအာရုံစူးစိုက်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်သင်လေဆိပ်အပေါ်ဖောက်သည်မျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးအလုပ်သမားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားသောဆောင်းပါးများကို၌သင်တို့ကိုမြင်လျှင်မျှော်လင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်အဓိကအားဖြင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများအဘို့ပြုနေသည်။ ဒီတော့ဝေးသင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများသည်အထဲကရှာပါ။ မျှော်လင့်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ပေးသောကုမ္ပဏီများအားလုံးအသုံးချပါပွီ။ ကျွန်တော်တစ်ဦးအလုပ် Finder ကုမ္ပဏီ၏ဖြစ်ကြပြီးအလုပ်ရှာနေသောကြောင့် အံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေရာတွင်အခြားသူများကိုကူညီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကစော်ဘွားများထားရှိရှိသည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလွန်ဂုဏ်ယူကြသည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ကမ္ဘာတဝှမ်းအများအပြားအမှတ်တံဆိပ်တည်ဆောက်ရန်ကူညီပေးခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးဖြစ်လာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေသူများတွေအများကြီးဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းအလုပ်တစ်ခု။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်တော်ဆော်ဒီအာရေဗျအလုပ်ရှာဖွေသူများကကူညီပေးခဲ့ကြပါပြီ။ အဖြစ်အိန္ဒိယ-ပါကစ္စတန်နံပါတ်တစ်အဖြစ်။ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် အီရန်နိုင်ငံသားများနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်အတူတောင်အာဖရိကနိုင်ငံ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တစ်ဦးချင်းစီ၏အလွန်ဂုဏ်ယူသည်။ ကျော်လွန် 50,000 အလုပ်ရှာဖွေသူများကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကအလုပ်ရခဲ့တယ်။ အပေါ် Juiced အသီးအသီးကဏ္ဍ ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ထဲမှာဆိုလို။ အင်ဂျင်နီယာ Is စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလူ့အရင်းအမြစ်များ, သူနာပြုကဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သွန်သင်။ ကျနော်တို့ပေးန်ဆောင်မှုများ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်။ သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူရဖို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါအလုပ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်သမျှ။ ကျနော်တို့ကအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးရှာကြသည်။ ဒါမယ့်စောင့်ရှောက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုလေ့လာပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါအရာတွေအများကြီးရှိသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးအဖြစ် ကမ္ဘာတဝှမ်းအလုပ်ရှာသူ.